Prof. Samater Oo Si Balaadhan Loogu Soo Dhaweeyay Ceerigaabo | Salaan Media
Prof. Samater Oo Si Balaadhan Loogu Soo Dhaweeyay Ceerigaabo
Caarigaabo (SM): Prof. Axmed Ismaaciil Samater iyo wefti balaadhan oo la socda oo muddooyinkanba socdaal indha-indhayn ah ku marayay gobolada Somaliland ayaa maanta gaadhay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolak Sanaag, halkaasi oo si balaadhan loogu soo dhaweeyay.
Waxaana Prof. Axmed Ismaaciil Samater dulkeedka magaalada Ceerigaabo kaga hortegay maamulka gobolka iyo ka degmada Ceerigaabo, salaadiin, cuqaal, odayaal, haween, dhalinyaro iyo dadweyne kale.waxaana weftigu markii uu gaadhay magaalada loo galbiyay dhinaca magaalada, iyada oo lagu wareejiyay jidadka magaalada oo ay tubnaayeen dadweyne badan kuwaasi oo weftiga ku qaabilay soo dhawayn iyo shucuub waddanimo.
Prof. Axmed oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay barxada hore ee Jaamacada Sanaag University, halkaasi oo ay ku sugnaayeen masuuliyiin jaamacada, ardayda Jaamacada Ceerigaabo maamulka gobolka, ka degmada, Salaadiin, Cuqaal, Boqoro iyo dadwayne kale oo aad u tiro badnaa.isaga oo Prof. Samater si wayn uga mahad celiyay sida wanaagsan ee loogu soo dhaweyay gobolka Sanaag, waxaanu sheegay in aanu ilaawi doonin sida qiimaha leh ee loo soo dhaweeyay.
khudbadii uu Prof. Axmed Ismaaciil Samater ka jeediyay Jaamacada Sanaag University ayaa waxa uu si gaar ah diirada ugu saaray dhinacyada waxbarashada, siyaasada arrimaha dibada Somaliland, adkaynta nabadgelyada, la dagaalanka qabyaalada iyo maamul wanaaga.
Waxa kale oo iyagna halkaasi hadalo ka jeediyay wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka Baddaha ee Somaliland C/lasahi Jaamac Cismaan (Geel jirre) oo ka mid ah weftiga, wasiiru dawlaha maaliyada, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, waxaanay si balaadhan uga warameen taariikhda gobolka Sanaag iyo baaxadiisa, waxaanay Prof-ka ku tilmaameen nin miisaan culus ku leh Somaliland.
Waxa sidoo kale iyagna halkaasi hadalo isugu jira soo dhawayn iyo warbixin ka jeediyay Maayarka Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo badhasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Ismaaciil Cabdi Xasan iyo Salaadiin iyo madaxda gobolka Sanaag oo cadeeyay sida ay ugu faraxsan yihiin imaatinka Prof-ka ee gobolka Sanaag.
Weftiga uu hogaaminayo Prof. Axmed Ismaaciil Samater oo muddo laba maalmood ah joogi doona gobolka ayaa shalay booqday buurta Daallo ee dalxiiska caanka ku ah.